Why Her ဒရမ်မာရိုက်ကူးနေရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Seo Hyun Jin - Cele Gabar
Why Her ဒရမ်မာရိုက်ကူးနေရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Seo Hyun Jin
မင်းသမီး Seo Hyun Jin ကတော့ လက်ရှိပြသနေတဲ့ Why Her? ဇာတ်လမ်းတွဲမှာအမိုက်စားဇာတ်ရုပ်နဲ့ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားတာပါ။ သူကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ရှေ့နေတစ်ယောက်အဖြစ်ပီပြင်တဲ့အပြင် လျှို့ဝှက်ပြီးခန့်မှန်းရခက်ကာထက်မြက်ပြီး သွေးအေးတဲ့သူအဖြစ်တွေ့ရပါတာပါ။ Seo Hyun Jin ရဲ့ ပီပြင်တဲ့အမိုက်စားဇာတ်ရုပ်နောက်ကွယ်ကပုံရိပ်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားကြတာပါ။
Seo Hyun Jin ကတော့ အမိုက်စားဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်ရတာမှာ အတော်လေးကိုပင်ပန်းတဲ့ပုံပါပဲ။ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ဗီဒီယိုကိုမျှဝေတဲ့အချိန်မှာတော့ Seo Hyun Jin ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေရင်းအမှန်တကယ်အိပ်ပျော်သွာခဲ့တာဖြစ်ပြီး Hwang In Yeop က သူ့ကိုဂရုစိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ Seo Hyun Jin နဲ့ Hwang In Yeop တို့ကိုတော့ Why Her ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အတွဲညီစွာတွေ့ရမှာပါ။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Seo Hyun Jin ကတော့ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေချိန် အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီး Hwang In Yeop ကတော့ သူ့ရဲ့ဆံပင်ကိုသပ်ပေးနေခဲ့တာပါ။ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေချိန်မှာ အိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်Seo Hyun Jin ကတော့ “တောင်းပန်ပါတယ်။ ငါအကြာကြီးအိပ်မိသွားတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ Why Her ဒရမ်မာဇာတ်ကားကတော့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာ တကယ့်နွေးထွေးပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ပုံပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ။
Why Her ဒရမ္မာ႐ိုက္ကူးေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တဲ့ မင္းသမီး Seo Hyun Jin
မင္းသမီး Seo Hyun Jin ကေတာ့ လက္ရွိျပသေနတဲ့ Why Her? ဇာတ္လမ္းတြဲမွာအမိုက္စားဇာတ္႐ုပ္နဲ႔ပရိသတ္ေတြကို ဖမ္းစားထားတာပါ။ သူကိုေတာ့ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အျဖစ္ပီျပင္တဲ့အျပင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ၿပီးခန႔္မွန္းရခက္ကာထက္ျမက္ၿပီး ေသြးေအးတဲ့သူအျဖစ္ေတြ႕ရပါတာပါ။ Seo Hyun Jin ရဲ႕ ပီျပင္တဲ့အမိုက္စားဇာတ္႐ုပ္ေနာက္ကြယ္ကပုံရိပ္ေတြကလည္း ပရိသတ္ေတြကစိတ္ဝင္စားၾကတာပါ။
Seo Hyun Jin ကေတာ့ အမိုက္စားဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ေအာင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရတာမွာ အေတာ္ေလးကိုပင္ပန္းတဲ့ပုံပါပဲ။ ႐ိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ဗီဒီယိုကိုမွ်ေဝတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ Seo Hyun Jin က႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေနရင္းအမွန္တကယ္အိပ္ေပ်ာ္သြာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး Hwang In Yeop က သူ႔ကိုဂ႐ုစိုက္ေနတဲ့ဗီဒီယိုကေတာ့ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ Seo Hyun Jin နဲ႔ Hwang In Yeop တို႔ကိုေတာ့ Why Her ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ အတြဲညီစြာေတြ႕ရမွာပါ။
ဒီဗီဒီယိုထဲမွာေတာ့ Seo Hyun Jin ကေတာ့႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ေနခ်ိန္ အိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့ၿပီး Hwang In Yeop ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဆံပင္ကိုသပ္ေပးေနခဲ့တာပါ။ ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ေနခ်ိန္မွာ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီးေနာက္Seo Hyun Jin ကေတာ့ “ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ငါအၾကာႀကီးအိပ္မိသြားတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ Why Her ဒရမ္မာဇာတ္ကားကေတာ့ ႐ိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္မွာ တကယ့္ေႏြးေထြးၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ပုံပါပဲ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
Posted in International CeleTagged International Cele, Seo Hyun Jin
Previous post သေးသွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို ပြောပြခဲ့တဲ့ Dara
Next post “ဖခင်ကြီးဆုံး​ပါးသွားတာ၁၂နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် သတိရလွမ်းဆွတ်အောက်မေ့ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ချယ်ရီသင်း”